Fantatrao ve fa : NY RONONO … | FJKM Amboniloha
Fantatrao ve fa : NY RONONO …
Fanomezana anisan’ny tsara indrindra nomen’Ilay Nahary antsika ny ronono.
Maro ny zava-tsoa entin’ny ronono ho an’ny vatantsika.
Ireto misy fikarakarana tsotra vitsivitsy afaka ataon’ny rehetra.
Fivontosana : Mony, vay …
Atsoboka anaty ronono mafana ny ati-mofo, iny feta iny avy eo no apetaka eo amin’ny faritra marary ary esorina refa mangatsika tsara. Averimberina matetika mandrapaha-mainan’ny fery. Azo ampasaina amin’ny “points noirs” koa ity fanomanana ity.
Main’ny masoandro na voakaikitry ny biby
Ronono vovony 1 sotro fihinanana, rano 2 sotro fihinanana, sira vovony 1 tsongo. Afangaro ho tonga feta ireo ary kosehina moramora @ io fanomanana io ilay faritra marary.
Misotro ronono mafana nasiana tantely sy vovo-kanelina kely @ hariva.
Ampangotrahina ny ronono ary asiana dipoavatra 1 sotrokely (dipoavatra voany tontoina somary vaventy no mety kokoa). Asorina ambony afo ary avela hilona minitra vitsy ao ilay dipoavatra dia tatavanina avy eo. Sotroina tsikelikely amin’izay ilay ronono mafana.
Afangaro anaty « mixeur » ny ronono miala herotra 1/2 vera, ny voatabia iray masaka tsara, ary ny tavolo avy @ katsaka 1 sotro fihinanana. Rehefa mahazo fangaro madinty tsara dia iny no ahosotra amin’ny tarehy efa madio. Avela hipetraka eo 30 minitra dia kobanina avy eo.
Volo tsy ampy otrikaina
Rehefa manasa loha dia faranana amin’ny ronono. Hosorana tsara ny tahom-bolo, avela hilona 5 minitra ary kobanina avy eo.
Catégories :	Fantatrao ve ?	/ par AnjGab 18 septembre 2014
Andao isika hitaiza vatana
Miarahaba antsika rehetra tongasoa eto @ ribrika natokana ho an'ireo torohevitra mety ahasoa antsika. Anombohana azy ary dia andao isika...
Fantatrao ve ?	Lire la suite
Rambon’omby sy tsaramaso
Sakafo tena mafilotra fa somary mila fotoana kely. Fatra ho an'olona efatra (04) Zavatra ilaina : Rambon'omby 01 Tongolo...
Fomba fampiasa ny ronono tsy ampoiznao
1. Ao andakozia : sady manalefaka ny hena no manome tsiro hafakely ny ronono. Raha mivaingana ka zary mafy be ny...